Manjaro 2021-09-24 inosvika nePipeWire 0.3.37 uye LibreOffice 7.2.1 | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki apfuura takatotaura kuti tanga tichizoburitsa izvo Manjaro zvinoburitswa neimwe nzira. Zvinowanzoenderana kuti vanozivisa kuuya kweshanduro yakagadzikana pamwe neIO nyowani, asi pane zviitiko zvakaita nhasi izvo zvisiri izvo. Maawa mashoma apfuura zvaziviswa kuwanikwa kwe manjaro 2021-09-24, asi panguva yekutanga chinyorwa ichi hapana chakamboburitswa nezve ingangove iyo v21.1.4 yeiyo inoshanda sisitimu.
Zvikonzero nei pasina ISO nyowani zvinogona kuve zvakasiyana kwazvo, zvave zvichinetsa mugadziri munguva yakapfuura. Zvatinazvo mapakeji nyowani mune ese ehurumende uye enharaunda shanduro, uye ndizvo zvinonzi Manjaro 2021-09-24. Pazasi iwe une iyo runyora rwemashoko inosimbisa izvo chirongwa chakatipa isu.
Manjaro anoratidza 2021-09-24
Mazhinji mhodzi yakagadziridzwa. Nezve izvi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti Linux 5.13 yatosvika kumagumo ehupenyu hwayo, saka zvinokurudzirwa kuisa Linux 5.14 kana iwe uchida chinhu chitsva kana Linux 5.10 kana iwe uchida kugadzikana.
Tafura yakagadziridzwa kuita 21.2.2.
ZFS ikozvino yave pa 2.1.1.
NetworkManager iri pa1.32.12.
KDE-git inogadziridza nguva dzose.
Imwe beta vhezheni yeFirefox yakawedzerwa.
PipeWire ikozvino yava pa0.3.37.
Iyo yazvino vhezheni yeLibreOffice ikozvino yave pa7.2.1.
gstreamer ikozvino yave pa1.18.5.
KDE Mapurani akagadziridzwa kuita vhezheni 5.86.0, iyo inounza kuvandudzwa kutsigiro yaWayland kune vatyairi veNvidia.
Zvimwe zvinowanzo gadziridzwa.
Iwo mapakeji nyowani ave kuwanikwa muPamac kana inogona kuiswa ne sudo pacman -Syu. Sezvo parizvino pasina ISO 21.1.4, avo vanoda kuve nenhau dzese nekuisa kubva pakutanga vanofanirwa kurodha pasi Manjaro 21.1.3 uye kusimudzira kubva kune imwecheteyo inoshanda sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 2021-09-24 inosvika nePipeWire 0.3.37, LibreOffice 7.2.1 nezvimwe zvinhu zvitsva.